China Vapor Kudzorera Valve fekitori uye vagadziri | Jiasheng
1.Aluminium alloy die-cast mamiriro, anodized kurapwa.
2. Yakakura chitubu kusagadzikana, nekukurumidza uye kwakasimba chisimbiso.
3. Yepamusoro yakarongwa kuyerera, yakaderera kumanikidza kudonha.
4. Nyore kuisa.
5. Inowanikwa neese TTMA flange.
6. Uchishandisa pneumatic controller kudzora kuvhura nekuvhara.
8. 1/4 NPT mhepo lineholes.
9. Inosangana EN13083 standard, flange inosangana neTMA standard.
Akanakisa mutengesi aruminiyamu chiwanikwa peturu yetangi mhute yekudzosa mweya vharuvhu yetangi rori nzira tangi
Kuti uise muChivako cheManhole kana pamusoro peTanker. Rutivi rwekubuda rwakasunganidzwa nehosi yerabha kune pombi yekudzosa pombi pombi. Iyo tanker painorodha kana kudzura kudzora mhute inopinda kana kubuda iyo tanker Ichi chinhu chakakosha kwazvo kune iyo vapor kupora system.
chigadzirwa zita ngarava yemafuta Vapor recovery valve
tembiricha renji -20 ℃ - + 70 ℃
svikiro peturu, parafini, dhiziri, mvura, nezvimwe
mashandiro mweya wemhepo
Direction yekushandisa uye zvakanakira aruminiyamu chiwanikwa peturu ngarava yemhepo yekudzosa mweya wevhavha
Kuti uise mukati meManhole Cover kana pamusoro peTanker. Rutivi rwekubuda rwakasunganidzwa nehosi yerabha kune pombi yekudzosa pombi pombi.
* Kuomesa Kurapa
Muviri wese wevhavha wakapfuudzwa yakakosha nzira yekuomesa hupenyu hwayo hwebasa.
Sequence kudzora kudzora yazvino vharuvhu yakavhurika kune akateedzana kudzora inotevera vharuvhu yakavhurika.
* Yakakwira Hunhu
Iyo simbi isina simbi yemukati shaft zvikamu zvinoita kuti ngura yayo irambe.
* Kurema Kurema
* Muviri mukuru wakagadzirwa nealuminium alloy, iri yakajeka uye yakasimba.
* Kuisa chisimbiso Zvakasimba
* Zvinonyatso kuvimbisa kuti ngarava haifashukire mushure mekuburitswa.
Item zita Vapor kupora vharuvhu Model Nhamba YJ7509
Main zvinhu Aluminium Saizi: 4 ″
Inoshanda nzira Pneumatic Kushanda kumanikidza 0.6MPa
Kubatanidza modhi Thread Temperature dungwerungwe -20 ~ + 70 ℃
Pakati Diesel, peturu, parafini Standard API1004 & EN13083
Mhepo yekudzoreredza vharuvhu yakaiswa pane yakavharidzirwa manhole kana pamusoro petangi kudzivirira mafuta uye gasi kuvuza mukuita kurodha uye kuburitsa kuitira kuti zvishandisirwe zvemukati.
Kana rori yetangi ichirodha nekuburitsa, inoshandisa pneumatic controller kuvhura iyo poppet vharuvhu kuchengetedza kuyerera nekukurumidza kwemafuta uye gasi, kudzokororazve, chisimbiso chinoshanda uye tangi yekumanikidza kuyerwa.
Chinhu Vapor kupora vharuvhu
Muenzaniso Nha. YJ7508
Mutumbi Meterial Aluminium chiwanikwa
Inoshanda Nzira Pneumatic
Kushanda Kushanda 0.6MPa
Pakati Peturu, Diziro, Dieseri
Kupisa Range -20 ~ + 70 ℃
Standard EN13083 standard, flange inosangana neTMTA standard.
Saizi 4 ″
Pashure: Frence API Adapter Valve
Zvadaro: Vapor Kudzoreredza Adapter
Fuel Dispenser Kuputsa Valve
5-Wire Kuwedzeredza Optic Ongororo uye Socket
optic sensor probe yakaiswa pamusoro peoiri tangi manhole chifukidziro. Iyo inopesana nekufashukira dziviriro mudziyo. Kana oiri ichibvumidzwa kuzadza mutangi yemafuta, inotarisa uye kudzora oiri yemazinga cordon. Kana mafuta achinge akwira kuenda kucordon, iyo sensor ichaita yambiro yekudzivirira mafuta kufashukira kana kupukunyuka. Iyo ndiyo yakachengeteka chengetedzo yekutaurirana systtem. Muviri wayo une mawaya maviri ekuisa chimiro. M20 static inobvisa inoda kuve yakagadzirirwa gasket rimwe uye kapu imwe kuti igadzire conductor. Izvo ...
Round Flange Bhora Valve
Type Type Flange Rutivi Kureba Hole Kure Kumanikidza Kupisa Range DN40 (1.5 ″) Aluminium Alloy 85 110 0.6MPA (-20, +70) DN50 (2 ″) 90 125 DN65 (2.5 ″) 115 145 DN80 (3 ″) 130 160 DN100 (4 ″) 155 180 DN100 (4 ″) 275 240